Kugara neInvestment yeThailand uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muThailand ye:
● Kugara nekudyara muThailand
● Ugari nekudyara kubva kuThailand
● Visa yegoridhe muThailand
● Pasipoti yechipiri kubva kuThailand
● Kugara nekudyara kweThailand nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muThailand uye Magweta e Kugara neInvestment muThailand uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muThailand zvinoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara neveInvestment vamiririri veThailand vanopa masevhisi ekugara nekudyara muThailand, Kugara nehurongwa hwekudyara muThailand, Kugara nehurongwa hwekudyara muThailand, kwechipiri Kugara nekudyara muThailand, hunyanzvi hwekugara nekudyara muThailand, ugari uye ugari nekudyara muThailand. , Kugara zvechigarire nekudyara muThailand, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muThailand, Kugara nehurongwa hwekudyara muThailand, Kugara nehurongwa hwekudyara muThailand, Citizenship nekudyara muThailand, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muThailand, Citizenship nehurongwa hwekudyara muThailand, wechipiri Citizenship nekudyara muThailand, hunyanzvi hwehukama nekudyara muThailand, kugara uye ugari nekudyara muThailand, kugara uye ugari nekudyara muThailand, hupfumi Citizenship zvirongwa muThailand, Ugari nehurongwa hwekudyara muThailand, Citizenship nehurongwa hwekudyara muThailand, chechipiri pasipoti mu Thailand, yechipiri pasipoti zvirongwa muThailand, yechipiri pasipoti chirongwa muThailand, mbiri yechipiri pasipoti muThailand, pekugara uye yechipiri pasipoti muThailand, repamutemo repasipoti repasi muThailand, yechipiri pasipoti nekudyara muThailand, yechipiri ugari pasipoti muThailand, yechipiri pasipoti chirongwa mu Thailand, yechipiri pasipoti zvirongwa muThailand, goridhe vhiza muThailand, yendarama vhiza muThailand, goridhe vhiza zvirongwa muThailand, goridhe vhiza vhiza muThailand, yechipiri goridhe visa muThailand, yechipiri goridhe vhiza vhiza kuThailand, huviri uye vhiza yegoridhe muThailand, kugara uye vhiza yegoridhe muThailand, mugari vhiza mugari muThailand, goridhe vhiza chirongwa muThailand, goridhe vhiza zvirongwa muThailand.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muThailand nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muThailand yeResidency nekudyara: USD 15,000
Nhanganyaya Thailand uye Kugara neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveThailand
Rudzi rwakazara kumadokero nekuchamhembe kwakadziva kumadokero neMyanmar (Burma), kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero neGungwa reAndaman, kumabvazuva nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva neLao PDR, kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva neCambodia, kumaodzanyemba neGulf yeThailand (mugero weSouth China Gungwa), uye neMalaysia.
Thailand inovhara nzvimbo ye513,120 km², nyika yacho ingori yakakura zvishoma kupfuura Spain kana yakati rebei zvakapetwa kaviri kukura kwenzvimbo yeUS yeWyoming.
Thailand inoramba ichingova chimwe chezvinonyanya kushorwa nevanozorora uye vanhu vari pamudyandigere muSoutheast Asia. Kunyangwe uri kugara munzvimbo inopisa, yeguta guru reBangkok, kuchamhembe kweLanna guta reChiang Mai, kana padyo nerimwe remahombekombe egungwa anoyevedza akaisa nyika pamepu, Thailand ine zvakawanda zvekuunza patafura. munhu wese.
Kunyange vamwe vangangoona kupisa kwegore rose uye hunyoro kunge hunopisa zvakanyanya uye hunyoro kune avo wavanoda, vamwe vanoukwazisa nemoyo wese mukumuka kwezuva rekutonhora kwemamwe maodzanyemba emuchadenga. Nenhamburiko shoma yekurarama, yepamusoro-notch yekurapa masevhisi pamutengo unonzwisisika, uye huwandu hwakawanda hwenzvimbo inowanikwa kuti utarise, hazvisi chinhu chinonetsa kutsauswa neNyika yeSmiles.
Ndege dzakasiyana siyana dzinopa nzendo dzezuva nezuva kunzvimbo zhinji dzemadhorobha muUnited States neCanada, sekune zvimwe zvinopesana zvakanyanya. Nenzvimbo yayo yakatarwa muSoutheast Asia, Thailand inzvimbo yakanaka yekuongorora dzimwe nyika dzepedyo. Iko hakuna kwechokwadi centralization yeakare-patsira mune chero chikamu chimwe cherudzi. Ivo zvechokwadi vakatambanudzwa kubva kune imwe kupera kweThailand kuenda kune inotevera.
Vamwe vanonanga kuchamhembe kuguta reChiang Mai uko manheru kunotonhorera kune ruzhinji rwegore. Nepo yasara yerudzi rwacho ichiri kuzorora mukudziya mukati memwedzi inotonhora yemamiriro ekunze, tembiricha muchikamu ichi cherudzi inogona kukwira kusvika 60 F kana zvishoma muhusiku. Pano ex-pats anokoshesa huwandu hwakawanda hwemaresitorendi, hunyanzvi hwekuratidzira, zvakajairika artworks, uye akasiyana akavhurika misika. Icho chero chinhu asi chakaoma kurongedza kumusoro kune yakasarudzika espresso, kuburitsa, uye zvimwe pakubvisa mukamuri mutengo.
Bangkok inokwevera mukati meavo vanhu vanozendamira kune nyonganiso uye simba reguta rakakura reguta. Guta rinozivikanwa nekuda kwehupenyu hwaro hwemumugwagwa, zviitiko zvehukama, husiku hunopa simba, uye inoshamisa kuratidzwa kwesarudzo dzekudya. Kunyangwe ichidhura kupfuura nzvimbo dzakasiyana, ichiri kufungidzirwa kutsvaga ivhu kuti rienderane nehurongwa hwezvemari.
Nzvimbo dzinozivikanwa dzemahombekombe emvura, semuenzaniso, Phuket nePattaya vanoramba vachikwezva vekare-patsva nhamba hombe dziri kutsvaga iyo yekuregedza yekufungidzira pamahombekombe egungwa. Kunyange hazvo huwandu hukuru hwenzvimbo idzi hwave kutengeswa zvakanyanya, zvichiri kufungidzirwa kutsvaga zvakajairika Thailand yemakore apfuura nekufambisa makiromita mashoma kubva kunzvimbo dzinozivikanwa dzekufarira. Iyo Thai beachside resort town yeHua Hin ingori maawa mashoma ekutyaira kumaodzanyemba kweBangkok uye ichiri zvechokwadi yakasarudzika ichisiyaniswa nevamwe vayo vakakurumbira vadyidzani. Chokwadi, kunyangwe padyo nemhenderekedzo yegungwa, basa rechikoro risati raitwa rinogona kuunza mwero mashoma wekurarama. Mari dzekurarama dzakasiyana zvinoenderana nekukanganisa. Parizvino kuchamhembe kweThailand ndiko kwakanyanya kudhura.
Bangkok inodhura zvakanyanya. Vanotsvaga pano vanosarudza kunakidzwa nekutenga nekudya kunze. Guta guru reThailand rinopa nzvimbo dzinoverengeka dzekutenga, nzvimbo dzekudyira dzinosarudzwa, kuratidzira, uye nzvimbo dzemitambo. Kune akawanda mavara ekuenda kuburikidza nemari yako pa. Ini ndinofunga iwe unofanirwa kushandisa mune chero chiitiko 40,000- 60,000 Bhat kuti uve nehunhu mararamiro. Kana iwe uri mari, panguva iyoyo zviri pachena, zvinofungidzirwa kushandisa zvishoma. Edza kusabuda kumagumo kwevhiki, idya mumabhawa emunharaunda, uye usashandise pazvinhu zvisina maturo uye uchave nesarudzo yekurarama pa30,000 baht pamwedzi wega wega.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeThailand
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muThailand
Kugara nekudyara kweThailand
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweThailand
Mushure mekugara muThailand kweanenge makore gumi.
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veThailand
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweThailand
ELITE chirongwa cheThailand chirongwa chakabvumidzwa nehurumende umo vhiza inoburitswa neThailand Ropafadzo Kambani Kambani Limited (TPC) inoshandiswa uye kuongororwa neBazi rezveKushanya neMitambo yeThailand.
Nezvekugara visa, Thailand inopa sarudzo nhatu. Chirongwa chevekunze veNNW vagari vanoda kugara vachipinda kana kugara muThailand.
Iyo yakasarudzika purogiramu yekugara muThailand inopa vanyoreri kodzero yekugara muThailand kwemakore anosvika makumi maviri, kuwana kune dzakakomberedzwa zvivakwa uye VIP mabhenefiti. Kuti uwane iyo Thai elite yekugara visa, vatorwa shuld vanobatana neThailand elite, chirongwa chakasarudzika chakapihwa neThailand ine rombo rakanaka kadhi kambani ine mashoma. (TPC)
Chirongwa ichi chakatangwa muna 2003 kukwezva vapfumi vemunyika dzese vanoda kushandisa nguva yakareba murudzi uye kutora mukana weinodhura asi hwepamusoro hwehupenyu uye hunobatsira mutero hutongi.
Chirongwa chekugara chevaThailand chinopa sarudzo nomwe, idzo dzinotevera nhatu dzakakurumbira.
VANHU VANHU VANOGONA KUKOSHA
Elite Yekupedzisira Ropafadzo vhiza yekugara yemakore makumi maviri pamubhadharo mumwe-wemadhora makumi matanhatu ezviuru pamwe nemari yegore rose inosvika madhora mazana matanhatu. Urongwa uhu hunosanganisira yakasarudzika VIP inotaura nendege uye nzvimbo yekutandarira yekuwana, isingagumi epasi-pfupi kufambisa nendege, hurumende concierge uye gorofu yekugamuchira vaenzi, marapiro epa spa uye chegore chehutano cheki.
VANHU VANHU VANOFANIRA KUWANIKWA
Elite Ropafadzo Kuwana ndeye 10-gore visa yekugara inoitirwa mafomu emhuri. Iko-kubhadharisa mubhadharo weiye mukuru anenge achinyorera ari madhora makumi matatu ezviuru uye kune mumwe nemumwe anovimba, USD 30,000. Iko hakuna mari yegore. VIP inotaura nhandare yendege, masevhisi ekufambisa, hurumende concierge services uye kugara uchiongorora hutano zvinosanganisirwa mupakeji.
VANHU VAKANAKA VANOGONA
Elite Easy Access ndeye makore mashanu ekugara vhiza iyo inogonesa expats kana vanhu vebhizinesi kupinda muThailand panguva yacho nguva nenguva uye nyore. Iyi sarudzo inoda kubhadharwa kamwechete kweinosvika $ 15,000 uye hapana muripo wegore unodiwa. Kweanosvika madhora makumi mashanu nemashanu, iyo Elite Easy Access yekugara visa inogona kukwidziridzwa kune Elite Yekupedzisira Ropafadzo sarudzo.
TPC inopa maitiro ekuva mugari wemo nyore: vhiza ichapihwa mune isingasviki mwedzi mumwe uye inogona kuunganidzwa kubva kune yakatarwa nhandare yendege muThailand. Kunze kwekunge kupihwa, vanyoreri vanogona kugara kana kugara muThailand kwenguva yakareba sezvavanoda, zvinoenderana nemitemo yepakeji yakasarudzwa. Vanyoreri vanofanirwa, zvisinei, vazivise iyo TPC kana vakagara munyika kwenguva inoenderera inopfuura mazuva makumi mapfumbamwe.
VAGARI VENYIKA NEKUVIMBEDZWA THAILAND
Visa yekugara yakawanikwa kuburikidza neyekugara chirongwa muThailand haitungamire kugara zvachose kana chinzvimbo chekuva mugari. Kugara kwekusingaperi kunogona kuwanikwa chete kana iye anenge achinyorera anga aine Thai asiri-immigrant visa kweanenge makore matatu pamberi pekutumirwa kwechikumbiro chake. Mushure mekubata chinzvimbo chekugara zvachose muThailand kwemakore gumi akadzokororwa, zvinokwanisika kunyorera kuva mugari wenyika.
Kutsigira kwevatengi kweResidency nekudyara kweThailand
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents yeThailand uye Residency ne Investment Lawyers yeThailand inopa vatengi uye mhuri dzavo muThailand nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuThailand, kugara nekudyara kubva kuThailand uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira mukugara nekudyara kubva kuThailand kana Golden Visa kubva kuThailand kana ugari nekudyara kubva kuThailand kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuThailand, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Thailand kana kumahombekombe egungwa, zviwanikwa zvevanhu muThailand uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuThailand nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veThailand:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeThailand, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeThailand, inokwanisika inivhesitimendi mari yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuThailand, inokwanisika Residency nevarairidzi vanopa mazano kuThailand, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara kuThailand uye isingadhuri immigration yekutaurirana yakasimba yeThailand.
Kugara nekudyara kubva kuThailand kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muThailand kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuThailand kuenda ku37 Nyika.
Pasipoti yechipiri kubva kuThailand kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuThailand kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuThailand.
Goridhe visa zvirongwa muThailand kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuThailand kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri mapasipoti mapasipoti kubva kuThailand kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuThailand kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweThailand kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muThailand nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muThailand, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekudyara kweThailand. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi muThailand vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muThailand, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba zvirongwa zveThailand zvine mari muzvivakwa muThailand.
Unoda kuziva - Thailand Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuThailand kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuThailand. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuThailand inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utame kubva kuThailand kana kuenda kuThailand, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Kugara nekudyara kweThailand kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeThailand uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuThailand, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuThailand isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera Thailand. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweThailand uye goridhe vhiza inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kweThailand zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveThailand.
Duration: 30 mazuva
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweThailand chikatenderwa, tinogovana newe nhau dzakanaka uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muThailand kune avo vataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muThailand:
Residency nebasa rekudyara kweThailand hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vagoveri vemaoko nema ammunitions kubva kana kuThailand.
Residency nezvirongwa zvekudyara zveThailand hadzipi kupihwa kweTechnical surveillance muThailand kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuThailand.
Residency nekutsvaga kwekudyara kweThailand hazvipi kupihwa kune chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muThailand.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeThailand haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muThailand.
Residency nebasa rekudyara kweThailand haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhaoloya kana nyukireya muThailand.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweThailand haruwanikwe kune vanhu veThailand vanoita mukutengesa, kuchengetedza muThailand, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeThailand haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeThailand hadzisi dzezvitendero zvechitendero uye masangano avo anobatsira muThailand.
Residency nebasa rekudyara mu Tairendi haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muThailand.
Kugara Kwedu magweta muThailand haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muThailand.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veThailand neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekuramba kupi zvako kubva kuzviremera muThailand kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muThailand.
Kugara nekudyara muThailand nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muThailand yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muThailand.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveThailand, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuThailand inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheThailand.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuThailand kutsigira vatengi uye mhuri dzavo kuThailand.
Vanoziva Kugara nevekutsvaga mari kuThailand nevamiriri vepamutemo veThailand vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanyanya magweta uye vamiririri veThailand kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuThailand uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuThailand
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira Thailand, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuThailand kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuThailand
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweThailand ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veThailand, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweThailand uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeThailand
Maitiro Ekubvumirwa kweThailand
Kwekugara kwenguva pfupi muThailand
Permanent Residence muThailand
Citizenity of Thailand
Embassies uye ma Consulates eThailand
Kugara neInvestment muThailand uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muThailand nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kuenda nemhuri yako kuThailand nekudyara mari, isu semumwe wako kuThailand, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muThailand nemitengo inodhura.
Kunze kwekugara zvakare nekudyara kwekudyara kweThailand, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muThailand, ayo iwe ausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanachipangamazano veThailand ichitigadzira one-stop shop yeThailand nenyika 106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuThailand mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweThailand nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-muThailand nekune dzimwe nyika.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muThailand kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muThailand yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muThailand
Chero ani investor anotamira kuThailand angazoda akaundi yebhangi muThailand uye account yebhangi yekambani muThailand, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muThailand
Kana iwe uchida kubvunza muThailand, ye mhinduro dzemadhijitari muThailand senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muThailand kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Thailand kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muThailand kutanga pakarepo muThailand.
HR Services muThailand
Our kambani yevashandi muThailand inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muThailand vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeThailand
Bhizinesi foni nhare dzeThailand pamwe ne nhamba dzeThailand Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muThailand
Accounting, kushingairira kwakakodzera muThailand uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muThailand
Setup bhizinesi muThailand
Mushure meResidency nekudyara kuThailand, setup bhizinesi mu Tairendi.
Isu tinopa pazasi zvataurwa IT mhinduro muThailand
Kugadzira Webhu muThailand
Ecommerce Kuvandudza muThailand
Webhu kuvandudza muThailand
Kuvandudza kweBlockchain muThailand
App Kubudirira muThailand
Software Kubudirira muThailand
Magweta eResidency neInvestment muThailand
Isu tinopa Kugara zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuThailand uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha kwazvo, kuThailand, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuThailand ine vamiririri vevanoenda kune dzimwe nyika zvakare muThailand, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa mutengi sevhisi yeThailand ne kujekesa zvine hungwaru mhinduro dzekudyara kweThailand vanhu uye mhuri. Yedu Residency neboka rekudyara kuThailand inopa mhinduro dzakagadzirwa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuThailand, pane yako mvumo yekugara muThailand inogamuchirwa.
Simba regweta reThailand rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevamiriri vezvekudyara muThailand. Kana iwe uri muThailand kana uronga kushanyira Thailand, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadharise zvimwe kuti tiwane Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuThailand ari kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mudunhu reThailand. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakapihwa dzidziso kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weThailand.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muThailand
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muThailand?
Kugara nekudyara kuThailand, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweThailand kuburikidza nekudyara muhupfumi hweThailand kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuThailand, kugaramo nehurongwa hwekudyara kweThailand. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuThailand, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muThailand, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muThailand uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kuThailand, kushanda pekugara zvakanakisa nevamiriri vezvekudyara muThailand, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muThailand.
Kugara nemabasa ekudyara kweThailand | Kugara nevamiriri vezvekudyara muThailand | Kugara nemagweta eInvestment muThailand | Kugara nemagweta ekudyara muThailand | Kugara nevanoona nezvekudyara kweThailand
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muThailand?
Ugari nekudyara kuThailand, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweThailand kuburikidza nekudyara muhupfumi hweThailand nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muThailand. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuThailand, ugari hwemo nehurongwa hwekudyara kweThailand hunotsigirwa nehugari hwemo nevekudyara mabasa kuThailand, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muThailand, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muThailand uye kuva mugari wakanakisa nevanoona nezvekudyara kweThailand kuva chizvarwa chakanakisa nevamiririri vezvekudyara muThailand, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muThailand.
Affordable Investor immigration services yeThailand | Vanodhura vanopinda munyika muThailand | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muThailand | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muThailand | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muThailand | Affordable immigration law firms kuThailand
Ndeipi tsanangudzo yepasipoti yechipiri muThailand?
Yechipiri pasipoti muThailand, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weThailand kuburikidza nekudyara muhupfumi hweThailand kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuThailand, yechipiri pasipoti chirongwa cheThailand chakatsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi kuThailand, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muThailand, magweta echipiri epasipoti muThailand uye akanakisa echipiri mapasipoti vanachipangamazano kuThailand, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muThailand, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muThailand.
Chechipiri pasipoti masevhisi eThailand | Chechipiri pasipoti vamiririri muThailand | Yechipiri mapasipoti magweta muThailand | Yechipiri mapasipoti magweta muThailand | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuThailand
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muThailand?
Ndarama vhiza muThailand, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeThailand kuburikidza nekudyara muhupfumi hweThailand kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera yegoridhe vhiza kuThailand, goridhe vhiza chirongwa cheThailand inotsigirwa ne goridhe vhiza masevhisi kuThailand, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muThailand, akanakisa endarama vhiza magweta muThailand uye akanakisa endarama vhiza varairidzi veThailand, vanoshanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muThailand, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muThailand.
Goridhe visa services yeThailand | Ndarama vhiza vamiririri muThailand | Magoridhe vhiza magweta muThailand | Magoridhe vhiza magweta muThailand | Goridhe vhiza varairidzi veThailand
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muThailand?
Kuderera kushoma kweResidency nekudyara muThailand iUS $ 15,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuThailand yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muThailand nevamiriri muThailand vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muThailand.
Kugara nekudyara kuThailand kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuThailand uye Kugara nekudyara mari zvinodiwa kuThailand ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunzana yeResidency neInvestment kuThailand, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeipi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuThailand kana investor visa kuThailand?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuThailand kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuThailand kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuThailand kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuThailand kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuThailand kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuThailand kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuThailand kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuThailand kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuThailand kubva kuNepal, Residency nekudyara kuThailand kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuThailand kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeThailand
Kumbira Yemahara kubvunzana kune yako Kugara neInvestment kuThailand
Mazwi akakosha muRudzi rwekugara neInvestment yeThailand
Dhipatimendi reZvakatipoteredza uye Natural Natural
National Statistics Inoratidzira Bhodhi
Dhipatimendi reInterior and Local Government
Iyo Filippine Atmospheric, Geophysical uye Nyeredzi yeAnyeredzi Services Administration
Dhipatimendi reSocial Welfare nekusimudzira
National Ehupfumi uye Simba rekusimudzira
Dhipatimendi rezvokufambisa uye Kutaurirana
Dhipatimendi reAgrician Reform
Dhipatimendi reDzidzo, Tsika Nemitambo
Philippine Economic Zone Chiremera
Dhipatimendi reZvekutengesa uye Zvigadzirwa
Dhipatimendi reBhajeti uye manejimendi
Dhipatimendi reScience uye Technology
Dhipatimendi reVashandi veRuzhinji neMigwagwa mikuru
National Statistics Hofisi
Dhipatimendi reVashandi uye Basa
Mauto Echisimba ePhilippines
Link to Dhipatimendi Rekupinda muThailand , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Kufamba kwevanhu muThailand